एक सन्देशमुलक स्तन ट्याटु
सिड्नी l स्तन क्यान्सरको समस्याबाट जुधिरहेकी एलिसन हेबलाई सँधै एउटै चिन्ताले सताई रहन्थ्यो, क्यान्सरको उपचारपछि उनको शरीरमा त्यसको कस्तो असर पर्ने हो ।
उनलाई लाग्थ्यो किमोथेरापीपछि उनको कपाल झर्नेछ, अप्रेशनपछि उनले आफ्नो स्तन गुमाउने छिन् र स्तनमा सँधैका लागि दाग रहने छ। उनका आफन्तले उनलाई
कुकुरलाई ८ वटा आइफोन
यो दुनियाका धनाढ्यहरुले कहिलेकाहीँ गरीबहरुको खिल्ली उडाउँछन् । गरीबलाई सहयोग गर्न उनीहरुको हात अघि बढ्दैन तर फजूलमा अनावश्यक खर्च गरी चर्चा बटुल्ने धृष्टता गर्दछन् । एकजना चिनिया धनाढ्यले यस्तै गरेका छन् ।
आइफोन सेभेन किन्नु भनेको धेरैका लागि केवल सपना मात्र हुनसक्छ । उच्च मूल्यका कारण धेरैले
अजिंगरसँग सेल्फी लिने प्रयास गर्दा झन्डै ज्यान गयो
भारतको राजस्थानमा अजिंगरसँग सेल्फी लिने चक्करमा झन्डै एक युवकको ज्यान गएको थियो।
१५ फिट लामो अजिंगरलाई शुक्रबार माउन्ट आबुको एउटा जंगलनजिकै रहेको तोरण होटलमा भेटिएको थियो। होटलका कर्मचारीले अजिंगरलाई देखेपछि तुरुन्त वन विभागमा सूचना दिएका थिए।
३ घण्टा लामो प्रयासपछि वन विभागका अधिकारी
फेसबुकमा फोटो शेयर गरेको भन्दै आमा बाबुविरुद्ध मुद्दा
दुनियामा फेसबुक चलाउने अभिभावकहरुमध्ये सायद त्यस्ता अभिभावक नहोलान् जसले फेसबुकमा आफ्ना प्यारा सन्तानका तस्वीरहरु शेयर नगरुन् ।
तर आफ्नै सन्तानका तस्वीर फेसबुकमा शेयर गर्दा कतिपय अभागी अभिभावकलाई सन्तानबाटै मुद्दा खेप्नुपर्दोरहेछ । अस्ट्रियामा यस्तै भएको छ । आफ्नो बाल्यकालको फोटो
विचित्रको रुख, जसमा फल्दछन् ४० थरी फल (भिडियो सहित)
रुख जे को हो, त्यसमा त्यसैको फल लाग्छ । तर यो दुनियमा यस्तो रुख पनि छ जसमा एकथरी होइन ४० थरी फल फल्दछ ।
यो विचित्र अमेरिकामा भएको होे । त्यहाँका एक भिजुअल आर्टका प्रोफेसरले एउटा अद्भुत रुख तयार पारेका छन् । ट्री अफ ४० नामले चिनिने यो रुखमा ४० प्रकारका फल फलाइएको छ ।
चार आँखा, दुईवटा मुख भएको बाच्छी जन्मियो
वासिंटन । अमेरिकाका एउटा गाईले अनौठो बाच्छी जन्माएको छ ।
केन्टुकीको एउटा फार्ममा पालिएको गाईले चार आँखा र दुई मुख भएको बाच्छी जन्माएको हो । बाच्छी तन्दुरुस्त रहेको बताइएको छ ।
बाच्छीको टाउकाको माथिल्लो भाग एउटै भए पछि आँखादेखि मुखसम्म दुईवटा टाउकोको स्वरुप छ । चारवटा आँखा भए पनि बीचका दुई
यी हुन् कसैको जीवनका अन्तिम तस्वीर (फोटोसहित)
काठमाडौं । रुसका पावेल काशिन खतरनाक स्टन्ट गर्न माहिर थिए । उनी यस्ता स्टन्ट गर्न रुचाउँथे ।
एउटा स्टन्ट उनको जीवनको अन्तिम क्षण बनेर आउँछ भन्ने उनलाई के थाहा ? १६ तले भवनको छतमा रहेको बरण्डामा ‘उल्टी जम्प’ गर्ने क्रममा सन्तुलन गुमाएर उनी जमिनमा खसे ।
उनको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । मृत्यु
केही महिना अघि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ बिक्रिमा रहेको समाचार आएको थियो । अहिले उनै सरिफका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीलाई बिक्रिमा राखिएको छ ।
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको मूल्य १ करोड तोकिएको थियो । तर भारतीय प्रधानमन्त्री त्यो भन्दा कैयौँ गुणा सस्तो मूल्यमा किन्न पाइनेछ । भारतीय
यस्तो छ सुनको ट्वाइलेट
न्युयोर्क l तपाईहरूले प्रायः सुनको सिंहासन र सुनको गहनाको विषयमा सुन्नु भएको होला। तर, के सुनको ट्वाइलेटको बारेमा कहिले सुन्नु भएको छ? हो, अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित गुगेनहीम संग्रहालयमा सुनको यस्तो ट्वाइलेट छ, जहाँ मानिसहरू मज्जाले बसेर दिसापिसाब गर्न सक्छन्।
यो संग्रहालयमा निमार्ण भएको १८
कण्डमको साटो प्लास्टिकको झोला
सम्भोगका क्रममा गम्भीर चोट लागेसँगै एक भियतनामी जोडी राजधानी हनोइको अस्पतालमा भर्ना भएका छन् । यौन सम्पर्क गर्दा यौनांगमा गम्भीर घाउ हुनुको कारण हो: उनीहरुको यौन सम्पर्क गर्दा कण्डमको रुपमा प्लास्टिकको झोलाको प्रयोग गरेका थिए ।
यौन सम्पर्क गर्न निकै मन लागेको तर कण्डम खरीद गर्न जान अति नै लाज